प्रेमदिवसमा तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना ल.... - नेपालबहस
प्रेमदिवसमा तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना ल….
| ०:२७:३६ मा प्रकाशित
न्यानो माया अनि मिठो सम्झना …! डियर जिन्दगी !! जीवनमा पहिलो प्रेमपत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु । तिम्रो न्यानो स्नेह र साथको आशमा । सायद तिम्रो मायामा म नजानिँदै फस्दैछु र मलाई साहरा दिई बचाउने पनि मात्र तिमी छौ यो संसारमा । के मेरो समीपमा आएर तिमी मेरो मायालाई स्वीकार्छौ ?
भन्छन्, माया बस्न मात्र एकनजर नै काफी छ । तर म त्यसको प्रतिकार गर्थें, वाहियात ठान्थें । सोच्थेँ, यो त सब भन्ने कुरा न हो । अनि विश्वास गर्थेँ, यथार्थमा । अरूले गर्ने मायालु भावनाका कुरामा कहिल्यै विश्वास लाग्दैनथ्यो । तर अहिले ! म गलत भइरहेछु डियर जिन्दगी, तिम्रा ती निश्चल र निर्मल नयनका सामु म झुकेँ वा झुकाइएँ ।
तिम्रो एकै नजरले मैले आफूलाई गुमाए । म नचाहेरै पनि तिमी तिर तानिए । तर तिमी ! तिमी त यो मेरो प्रेमबारे नै अनभिज्ञ छौ, नादान छौं ।अचम्म लाग्छ, किन म तिमीसँग आँखा जुधाउन सक्दिनँ । मेरा आँखा अनायसै झुक्छन्, तिमी सामु हुँदा । मेरो जिउ शिथिल हुन्छ, तिम्रो समीपमा आउँदा । के तिमीलाई मेरो यो अवस्थाको आभास हुँदैन ?
म त फेरि गरिब परिवारको, तिमीले स्वीकार्यौ भने संसारको सबैभन्दा धेरै र ठुलो खुशी मिल्नेछ मलाई । तिम्रो न्यानो काखमा असीम माया पोखिदिनेछु छताछुल्ल हुने गरी, अनि हराउनेछु तिमीभित्रै । अस्वीकारै गरेपनि म दुःखी हुने छैन डियर जिन्दगी !!
डियर जिन्दगी ! तिमी निर्दोष बनिरहेकी छौं जानीजानी ? म तिम्रो निर्मल आँखाको सागरमा डुबुल्की मार्न चाहन्छु, हराउन चाहन्छु, अनि सारा कुरा भुल्न चाहन्छु । ती नीलो सागर सिगै बोक्ने तिम्रो नयन, त्यो हँसिलो र प्रज्वलित मुखमण्डल अनि मधुर मुस्कान देख्दा लाग्छ तिमी मानव नभएर साक्षात ईश्वरको प्रतिबिम्ब हौ । तिम्रो निकटता कल्पिँदा संसारका सबै सुख र खुशीहरु मेरा पाउमा झुकिरहेका छन् झैँ लाग्छ । के छ खास तिम्रो मुस्कानमा, जसले हरक्षण मलाई पागल अनि पागल बनाउँदै लगिरहेको छ ।
डियर जिन्दगी ! तिमीलाई एउटा कुरो भनौ ? मेरा आँखाहरू तिमीलाई नै खोजिरहन्छन्, हरक्षण । केवल तिमीलाई लुकेरै नियाल्न मन छ भन्छ यो मन । मैले लिने हरेक श्वासमा तिम्रो प्रेमको मीठो वासनाको अनुभव गर्छु म ।
डियर जिन्दगी,, तिमी विश्वास गर या नगर मेरो माया सागर जस्तो निर्मल र पवित्र छ, बादल जस्तो शितल छ, वसन्तको सौन्दर्य जस्तो सुन्दर छ, गोधुली साँझ जस्तो शान्त छ अनि सुधा जस्तै अमर छ । तर मेरो मायालाई स्वीकार गर्नु या नगर्नु त्यो त तिम्रो इच्छा को कुरो ? म त फेरि गरिब परिवारको, तिमीले स्वीकार्यौ भने संसारको सबैभन्दा धेरै र ठुलो खुशी मिल्नेछ मलाई । तिम्रो न्यानो काखमा असीम माया पोखिदिनेछु छताछुल्ल हुने गरी, अनि हराउनेछु तिमीभित्रै । अस्वीकारै गरेपनि म दुःखी हुने छैन डियर जिन्दगी !!
प्रेमको हर्ष विष्मादोन्मुख प्रतिच्छायाँमा लुकामारी खेलिरहेछन् । यो कम्पित मुटुलाई ठेगान लगाउन् मलाई तिम्रो मायाको न्यानो ओढार चाहिएको छ । डियर जिन्दगी ! तिमी र म मिलेर भावनाको उर्बरखेती गर्ने किसान बनौं न हुँदैन ?
मलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई निस्वार्थ प्रेम गरेकी छु । मेरा हरेक श्वासका झोंक्का तिमीप्रति समर्पित छ । अनि अत्यन्तै प्रगाढ र गाढा । म तिमीप्रतिको प्रेमले मेरा हरेक अवयवहरुमा सीञ्चित गरेर राख्नेछु अनि जिउने प्रयास गर्नेछु, तिम्रै प्रेममा । मेरो मायामा स्वार्थ नै छैन अनि मैले तिमीलाई जबर्जस्ती पाउने चेष्टा गरेको पनि छैन ।
डियर जिन्दगी ! तिमी धेरै टाढा छौँ, थाहा छ मलाई । त्यसैले त म भन्ने गर्छु, मेरा लागि प्रेम आत्मिय बन्धन हो, जहाँ मनसँग मनको गहिराई नापिन्छ र यो अटुट रहन्छ । के तिमी मेरो यो मिठो अनुरोध स्वीकार गर्छौ ? तिम्रो मायामा रम्ने हक दिन्छौ मलाई ? म तिम्रो जवाफ पर्खिरहनेछु, कालान्तरसम्म अनि यसरी नै निस्वार्थ प्रेम गरिरहनेछु ।
तेसो त डियर जिन्दगी ! हरेक दिन आउने यो चौबीस घण्टाको समय तिमीलाई सम्झिनका लागि एकपल जस्तो मात्र लाग्छ । यी सपनाजस्ता दिन तिम्रै झझल्कोमा बित्दै बित्दै जान्छन् । मेरो हृदयको दृष्टि जहाँसम्म पुग्छ, म तिमीलाई त्यहाँसम्म देख्छु । तिम्रो सम्झना र मायालुपनलाई बहन गर्न नसक्दा बहन्छन् अश्रुबुँद अनि लपक्कै भिज्छ मन । जब नियाल्छु सजल मन तब तिम्रै सुकुमार मुहार मुस्कुराइरहेको हुन्छ ।
पलपलमा सपनामा हराउने म आज पनि गडयाङ गुडुङ आवाज निकाल्दा चिरिएर दुई फयाक भएर आकाशको छातीबाट भएको मुसलधारे वर्षाबाट मेरो मुटु लगलगाइरहेछन् । प्रेमको हर्ष विष्मादोन्मुख प्रतिच्छायाँमा लुकामारी खेलिरहेछन् । यो कम्पित मुटुलाई ठेगान लगाउन् मलाई तिम्रो मायाको न्यानो ओढार चाहिएको छ । डियर जिन्दगी ! तिमी र म मिलेर भावनाको उर्बरखेती गर्ने किसान बनौं न हुँदैन ?
म बिर्सिन सक्दिन हाम्रो टेलिफोनवार्ता ! भाइवर र मेसेन्जरमा घण्टौ बिताएका पलहरु । म बिर्सिन सक्दिनँ तिम्रा ती स्वर्गको आभास दिलाउने अमूल्य, अदभुत, अस्पृश्य बचनहरु । ती भव्यताले भरिपूर्ण झलकको सहारामा मैले स्वर्गको कल्पना गरे । तिम्रो तस्वीरलाई अन्तसंकरणको क्यानभासमा टाँगे । दिलको बाकसमा लुकाएँ । ए डियर जिन्दगी ! समुन्द्रको नुनिलो पानीझै हुँदोरहेछ माया । जति पियो, त्यति प्यास जाग्ने । कहिल्यै तृप्ति नहुने ।
डियर जिन्दगी ! प्रेम शाश्वत छ, महान छ र, दूरताले यसलाई अझ गाढा बनाउँछ । प्रेममा एकअर्काको अनुपस्थितिले यादलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ र माया चरमोत्कर्षमा पुग्छ । विश्वभरिका राता गुलाफहरु जोडेर मैले तिमीलाई विराजमान गराउन सिंहासन तयार गरेकी छु । फूलको राजा गुलाफ भएझैं तिमी मेरो जिन्दगीको राजा हौं । सधैंको लागि तिम्रो सवारी होस् अनि सुस्तरी बस है, यो गुलाफमय रक्तिम सिंहासनमा ।प्रेमजस्तै कोमल र नाजुक छ यो पनि र भत्किन सक्छ, होस् गर हैं ।
डियर जिन्दगी ! तिमी प्रेमको दूत, मेरो मृगतृष्णा । मेरो तन, मन र जीवनमा तिम्रो स्पर्शको न्यानोपनको आशा जीवनपर्यन्त बाँकी रहनेछ । रुवा भन्दा पनि न्यानो, नरम र कोमल छौ तिमी मलाई । त्यो प्रेमिल सपनाका पानालाई मनको पुस्तकालयमा छिरेर अध्ययन गर्न मन छ, के तिमी अनुमति दिन्छौ ?
म बिर्सिन सक्दिन हाम्रो टेलिफोनवार्ता ! भाइवर र मेसेन्जरमा घण्टौ बिताएका पलहरु । म बिर्सिन सक्दिनँ तिम्रा ती स्वर्गको आभास दिलाउने अमूल्य, अदभुत, अस्पृश्य बचनहरु । ती भव्यताले भरिपूर्ण झलकको सहारामा मैले स्वर्गको कल्पना गरे । तिम्रो तस्वीरलाई अन्तसंकरणको क्यानभासमा टाँगे । दिलको बाकसमा लुकाएँ । ए डियर जिन्दगी ! समुन्द्रको नुनिलो पानीझै हुँदोरहेछ माया । जति पियो, त्यति प्यास जाग्ने । कहिल्यै तृप्ति नहुने । मायाप्रीति लगाउनका लागि एकपल जस्तो मात्र लाग्छ यो जीवन । किनकि यो असीम छ र अविराम छ ।
म रातको शून्यतामा तिम्रो पदचापको आहटले पटक पटक ब्युँझिन्छु । मलाई सुनसान ठाँउमा पनि तिम्रो आवाज सुनेजस्तो लाग्छ । त्यसैले ध्यानपूर्वक सुन्छु म मौनतालाई । बेहोशीमै तिमीलाई सम्झिएर बर्बराउँछु । वास्तविकता । किनकि प्रेमविनाको जीवन निरश र र ब्यर्थ हुन्छ । अधुरो हुन्छ । सुरविनाको सङ्गीतजस्तो । शब्दविनाको गीतजस्तो ।दृष्टिविनाको आँखाजस्तो । फूलविनाको काँडाजस्तो ।
डियर जिन्दगी ! तिमीलाई थाहा छ ? तिम्रो याद आएपछि मलाई नियास्रोले मर्माहत बनाउँछ । काम गर्दागर्दै गर्न बिर्सिन्छु, हिडदा हिडदै हिड्न बिर्सिन्छु । ए कोमल प्राणी ! मात्र तिमीलाई वारम्बार सम्झिन्छु । जहाँ जाउँ, तिमी नै तिमी, हेराईमा तिमी, खोजाईमा तिमी, यो जिन्दगीको श्रुतिमधुर गजल तिमी, हाँसो, आँसु, आश्चर्य अनि गुनासो सबैमा तिमी नै तिमी । संसारभरीकै आदरणीय, अद्धितीय र प्रिय छौं तिमी मेरो लागि, डियर जिन्दगी ।।
यो कस्तो बेहोशी ? कस्तो रोग ? यसको उपचार खोज्दैछु म । सबैतिर मायालुको रुप देख्ने दृष्टिभ्रम हो कि यथार्थ ? दोधारमा छु । मझधारमा छु । तिम्रो महिमा गाउन, तिम्रो भव्यताको तारिफ गर्न । तिमीलाई सम्बोधन गरेर बोलाउन कुनै उपमा पनि उचित छन् जस्तो लाग्दैन् । डियर जिन्दगी ! सबैभन्दा अग्रस्थानमा छौं तिमी ।
थाहा छ तिमीलाई, म रातको शून्यतामा तिम्रो पदचापको आहटले पटक पटक ब्युँझिन्छु । मलाई सुनसान ठाँउमा पनि तिम्रो आवाज सुनेजस्तो लाग्छ । त्यसैले ध्यानपूर्वक सुन्छु म मौनतालाई । बेहोशीमै तिमीलाई सम्झिएर बर्बराउँछु ।
वास्तविकता । किनकि प्रेमविनाको जीवन निरश र र ब्यर्थ हुन्छ । अधुरो हुन्छ । सुरविनाको सङ्गीतजस्तो । शब्दविनाको गीतजस्तो ।दृष्टिविनाको आँखाजस्तो । फूलविनाको काँडाजस्तो ।
डियर जिन्दगी ! तिमीलाई थाहा छ ? आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेमदिवस । यो अवसरमा तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना ल !!!! ।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण ५ मिनेट पहिले
व्यावसायिक कृषिमा रम्दै पोखरेल १२ मिनेट पहिले
ओलीका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यकता कि बाध्यता ? १४ मिनेट पहिले
खुमलटारमा प्रचण्ड वामदेवको भेटर्वाता १७ मिनेट पहिले
मापदण्डविपरीत व्यवसायीले बगर उत्खनन गर्दै २९ मिनेट पहिले
म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे शुरु ३७ मिनेट पहिले
नवनियुक्त राजदूत रेग्मी र चेम्वर पदाधिकारीहरु बीच आर्थिक अभिवृद्धि बारे छलफल ४२ मिनेट पहिले
आर्थिक अभावले डडेल्धुरा सेमी कभर्ड हल अलपत्र ४९ मिनेट पहिले
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयमा तालाबन्दी, पठनपाठन प्रभावित ५० मिनेट पहिले
कामना सेवा बैंकको ऋणपत्र बाँडफाँड ५२ मिनेट पहिले
अवैध रकम बोकेर भारततर्फ जान लागेका बुबाछोरा नियन्त्रणमा ५७ मिनेट पहिले
विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी, विद्यालय बन्द ! ६० मिनेट पहिले
प्रयोगविहीन बन्दै अनुदानका उपकरणहरु २३ घण्टा पहिले
फिलिपिन्सको पर्यटन क्षेत्रमा महामारीको व्यापक असर, ८ अर्ब डलर राजश्व गुम्यो ३ हप्ता पहिले
क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा होइन : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प २ वर्ष पहिले
रुबसकाँडाबाट शुरु भयो नियमित प्याराग्लाइडिङ ४ महिना पहिले
विश्वप्रसिद्ध एयरबसको नोक्सानी १ अर्ब ३६ करोड युरो १२ महिना पहिले
युरोपा लिग फुटबलको उपाधि चेल्सीलाई [फोटोफिचर] २ वर्ष पहिले